SSE oo cambaaraysay dadkii lagu dilay mudaharaadadii Hargeysa ka dhacay
Dallada SSE oo ay ku bahoobeen Jahliyadaha ama ururada Somaliland ee Yurub waxay ugu horayn hambalyaynayaynaysaa shacbiwaynaha Somaliland sidii qiimaha lahayd ee ay ugu soo baxeen doorashooyinkii golaha degaanka ee dalka ka qabsoomay 28.Nov.2012 ka, iyaga oo saacado badan qoraxda u taagnaa sidii ay xisbiga iyo shakhsiga ay rabaan codkooda ugu dooran lahaayeen.
Sidoo kale waxaanu u soo jeedinaynaa cid kasta cabasho qabtaa in ay u marto nidaamka sharci ee aynu dhiganay.
Waxaanu ka codsanaynaa in gudi loo saaro sababta keentay dhimashada iyo dhawaaca intaas leeg iyo sidiin aanay musaqbalka tan oo kale u dhici lahayn.
SSE Waxa ay guud ahaanba shacbiga Soomaaliland gaar ahaan Gudiga doorashooyinka , xukuumada iyo Ururada cabanayaba ugu baaqaysaa in si wada jir ah nabadgalyada loo ilaaliyo. Wixii cabasho ahna la isa soo hor fadhiisto oo la iska qanciyo.
(Waa in caqligu shaqeeyaa ee aanay cududu shaqayn)
Tubtaas oo ah ta ay Somaliland halkan ku soo gaadhay, isla markaasina xudunta u ah wadajirta iyo dhawrida qaranimada aynu maanta hadhsanayno.
Ururka SSE waa dallad ay ku bahoobeen ururadda reer Somaliland ee waddamada Yurub. Waa dallad dhexdhexaad ah oo aan dhinacna raacsanayn. Web Updating, Somaliweyn Website